China scaffolding jack base ye ringlock, cuplock kana H furemu etc. fekitori nevatengesi | Zhongming
U musoro & Jack base
Scaffolding jack base ye ringlock, cuplock kana H furemu nezvimwe.
FOB Mutengo: US $ 0.5 - 9,999 / Chidimbu
Min.Order Uwandu: 100 Piece / Zvidimbu
Kupa Mazano: 10000 Piece / Pieces pamwedzi
Iko kushandiswa kwejack base: Inoshandiswa nepombi dzesimbi uye scaffolds mune yekuvaka maitiro ekugadzirisa kukwirira kweespaffolds uye pombi dhizaini, chiyero chinotsigira uremu, uye kutakura-kutakura. Inonyanya kushandiswa mukugadzira kongiri kudira kwekuvaka. Nekukurumidza kukurumidza kwekutengesa zvivakwa uye matatu-mativi ekufambisa mumakore achangopfuura, huwandu hwedenga rutsigiro hwaitawo nekukurumidza kufambira mberi.
Kupatsanura kwemajuru ekuvaka:
1. Zvinoenderana nechikamu chakashandiswa, chinogona kukamurwa kuita rutsigiro rwepamusoro uye rutsigiro rwepasi
① Rutsigiro rwepamusoro runoshandiswa kumucheto wepamusoro wepombi yesimbi, chassis iri kumucheto wepamusoro, uye chassis ine hemming;
Rutsigiro rwepazasi runoshandiswa kumucheto wezasi kwepombi yesimbi mukuvakwa kweprojekti yekuvaka, chassis iri pazasi chikamu, uye chassis haigone kupetwa;
2. Zvinoenderana nezvinhu zveguru, inogona kuganhurwa mumhando mbiri: mhango jack uye yakasimba jack. Iyo yekumberi sikuruu yehomba jack yakagadzirwa neakakora-ane masimbi simbi pombi, iri nyore; iyo jack yakasimba inogadzirwa nesimbi yakakomberedza, inova inorema.
3. Zvinoenderana nekuti ine mavhiri here kana kuti kwete, inogona kukamurwa kuita: yakajairika tsigiro yepamusoro uye rutsigiro rwegumbo pamusoro. Iwo mavhiri majeki anowanzo kuvezwa uye anoshandiswa muchikamu chezasi cheinofambiswa scaffold kufambisa kukwidziridzwa kweiyo nzira yekuvaka; zvakajairwa jacks zvinoshandiswa mukuvakwa kweinjiniya zvivakwa kutsigira kugadzikana.
4. Zvinoenderana nekugadzirwa kweiyo screw, iyo yakasimba jack inogona kugoverwa inopisa-yakakungurutswa sikuru uye inotonhora-yakakungurutsa sikuru. Iyo inopisa-yakakungurutswa sikuruu ine chitarisiko chakatsvinda uye zvishoma yakakwira mutengo; iyo inotonhora-yakakungurutswa sikuru ine chitarisiko chisiri chakanaka uye ine mutengo wakaderera zvishoma.
Iko kumisikidzwa kweiyo screw yekuvaka, kugadzirwa kwevagadziri munzvimbo dzakasiyana kwakafanana, kumisikidzwa kwakasiyana, uye kumisikidzwa kunogona kusiyaniswa kubva kune mashanu maficha:
1) Chassis: Ukobvu uye saizi yechassis zvakasiyana munzvimbo dzakasiyana nevakagadziri.
2) Kusimbisa mbabvu: Kunyangwe paine inosimbisa mbabvu muchikamu chekubatanidza chekamuti tsvimbo uye chassis, kazhinji zvinoenderana nezvinodiwa zveprojekti, iyo refu yepamusoro tsigiro yeiyo sikuru yakasungirirwa yakanangana nekusimbisa mbabvu, uye ipfupi pasi inotsigira hazviwanzoshongedzerwa.
3) Kureba kweiyo sikuru iri kazhinji kubva pamakumi mana kusvika makumi manomwe, uye ukobvu hwesikuru kazhinji φ28, φ30, φ32, φ34, φ38mm.
4) Pane maitirwo maviri ekugadzira ekugadzirisa nzungu dzakashongedzwa nerutsigiro: simbi castings uye kutsika dzichiumba zvikamu. Nuts Mhando yega yega yekugadzirisa nati ine mwenje kana saizi inorema. Kune maviri marudzi ehuni maumbirwo: mbiya nati uye bapiro sikuruu
Heavy Duty Ringlock Scaffolding, Ringlock Scaffolding Zvikamu, Scaffolding Chinogadziriswa Screw Jack, Ringlock Scaffolding chikomboredzo, Metal Cuplock Scaffolding, Kwikstage Scaffolding Chishongedzo,